जनता समाजवादी पार्टीलाई ठुलो झ'ट्का, वडाध्यक्ष र वडासदस्य नै कांग्रेसमा प्रवेश !
जनता समाजवादी पार्टीलाई ठुलो झ’ट्का, वडाध्यक्ष र वडासदस्य नै कांग्रेसमा प्रवेश !
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट निर्वाचित भएका वडाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ वडाध्यक्ष अस्लम आलम जसपा परित्याग गरी कांग्रेसमा गएका हुन्।
त्यस्तै वडा नम्बर १७ का वडासदस्य फिरोज आलम पनि जसपा परित्याग गरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। शुक्रबार उनीहरुलाई कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य हसन अन्सारीले टीका लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका छन्।
चुनावको मिति नजिकिन थालेपछि राजनीतिक वृत्त तातिन थालेको छ। कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता थियो। नव प्रवेशीहरुले पार्टीलाई थप बलियो बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन्।
यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेता विदेश विभाग प्रमुख नारायाणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी यथास्थितिमा नेपालले स्विकार गर्न नसक्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनले यस्तो बताएका हुन् ।